रोचक जानकारी – Page 22 – MeroJilla.com
पुरुषको मुखमा पिसाव गर्ने अधिकार ! Sunday, May 25th, 2014
एजेन्सी/संसारका कयौ देशमा परम्परागत र कानुनी रुपमा महिलालाई केवल आफ्नो श्रीमानसँग मात्र यौन सम्बन्ध कायम गर्ने अनुमति दिइएको छ। तर, संसारको एउटा यस्तो स्थान पनि छ, जहाँ महिलालाई अनौठा अनुमतिहरु प्रदान गरिने छ। जुन सुनेर तपाई पनि आश्चर्यमा पर्नुहुनेछ । पपुवा न्यु गिनीका ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई कुनै पनि पुरुषसँग यौन सम्बन्ध कायम गर्ने छुट छ । त्यति मात्र होइन, यदि कुनै..
महिलाको हिडाइबाटै थाहा हुन्छ यौन सन्तुष्टि Friday, May 23rd, 2014
कुनै पनि महिलाले यौन सम्पर्कका बेला चरम सन्तुष्टी पाए नपाएको कुरा उनिहरुको हिँडाइबाटै थाहा हुने पछिल्लो एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन अनुसार सेक्सका बेला चरम आनन्दमा पुग्ने महिलाहरु अरु महिला भन्दा भिन्न तरिकाले हिड्ने गर्छन् । बेल्जियमका शोधकर्ताहरुले गरेको अध्ययन अनुसार यौन सम्पर्कका बेला चरमोत्कर्षमा पुग्ने र चरमोत्कर्षमा पुग्नै नपाइकन सम्भोगबाट अलग्गिन बाध्य..
सेक्सको क्रममा यदि तपाइको पार्टनर उफ..आह या आउच जस्ता आवज निकाल्छ भन्दैमा तपाइले यो सोच्नु भएन कि, उनले चरम सन्तुष्टि प्राप्त गरिरहेका छन् पार्टनरले सेक्सको आनन्द लिइरहेको भनेर भ्रममा पर्नु व्यार्थ हुन्छ । किनभने यो देखावटी मात्र पनि हुनसक्छ । ब्रिटेनका शोधकर्ताहरुले एक सोधमा ‘लगभ २५ प्रतिशत महिला सेक्सका क्रममा आवाज निकालेर चरम आनन्द लिएको’ अभिनय गर्ने खुलासा गरेका छन्..
शिघ्रपतनको कारण यही नै हो भनेर भन्न सकिने अवस्था नभए पनि यसको मूल कारण मानसिक नै भएको पाइन्छ। प्रायःसबैजसो पुरुषले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समयमा शीघ्र वीर्य स्खलन भएको अनुभव गरेका हुन्छन्। घर्षण नै गर्न नपाई वीर्य स्खलन हुने समस्या पुरुषहरूमा देखिने यौनसम्बन्धी समस्यामध्ये सबैभन्दा बढी पाइने समस्या हो। आफ्नी श्रीमती वा यौन जोडीलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दिनँ कि भन्ने..
यदि तपाईको यौन साथीले पूर्ण रुपमा यौन आनन्द प्राप्त गरेको कुरामा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्न भने सोच्नुस् माया छ भन्दैमा तपाई उसको मनको सबैकुरा पढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने छैन । यद्यपी माया छ भने उसको शरीर र उसको सोचाइ कसरी आनन्दीत हुन्छ भन्ने कुरा केही हदसम्म थाहा हुन सक्छ । तपाई आफ्नो यौन साथीलाई यौनसम्पर्कको लागि पूर्ण रुपमा तयार चाहानुहुन्छ भने तपाईले चुम्बनको स्पर्शबाट..
सेक्स गर्ने निश्चित समय छैन । उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्छन् । तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा सेक्स गर्दा बढि राम्रो हुन्छ । एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अरु यस्ता कारण पनि छन्, जसले तपाईंलाई विहानकै समयमा सेक्स गर्न उत्साह पैदा गर्न सक्छ । एउटा मात्र होइन, धेरै किसिमका सोध र अनुसन्धानबाट तपाईंलाई स्वस्थ..
कति उमेरमा सेक्स गर्दा बढि मज्जा ?……युवतीहरु १७ बर्षमै भर्जिनिटी तोड्छन
सामान्यतया कुरकुरे बैँश अर्थात् किशोरावस्थाको समयमा मान्छे सेक्सको विषयमा सबैभन्दा धेरै उत्सुक हुन्छ र त्यस्तो कौतुहलताको उमेरमा गरिने सेक्समा उसले सबैभन्दा धेरै सन्तुष्टी पाउँछ होला भन्ने आमधारणा छ । तर यो धारणा सही भने होइन । पछिल्लोपटक गरिएको एक अध्ययनले महिलाहरुको हकमा २८ वर्षको उमेरमा गरिने सेक्स सबैभन्दा आनन्ददायक हुने देखाएको छ । तर पुरुषको हकमा भने सेक्समा..
महिलाको वक्षस्थल एक महत्वपूर्ण प्रजनन अंग मात्र होइन सुन्दरताकेा प्रतिक पनि मानिन्छ । त्यहीँ भएर होला महिलाहरु आफ्नो वक्षस्थलको सुन्दरताप्रति निकै सजग हुन्छन् । वक्षस्थलको स्वरुपले महिलाको समग्र सुन्दरतामा प्रभाव पार्छ । केही समय पहिले एक विदेशी अनलाइनले गरेको सर्भेक्षणले एउटा अनौठो तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस अनुसार ७४ प्रतिशत पुरुषहरुले जब महिलालाई हेर्छन् तब..
गाउनभित्रै छिरेर गुप्तांगको फोटो लिन खोज्दा…. Tuesday, May 20th, 2014
फ्रान्स । सुन्दै अचम्म लाग्ने घटना भएको छ फ्रान्समा । पत्रकारिताको मर्यादा विपरीत यूक्रेनका एक जना पत्रकारले यस्तो फोटो खिच्न कोसिस गरे, जुन कुरा सुनेर तपार्इंलाई पनि अचम्म लाग्छ । प्रसंग हो, ‘हाऊ टू ट्रेन योर ड्रैगन’ की स्टार हिरोइन अमेरिका फरिकाको । फरिका कान्स फेस्टिवलमा आफ्नो फिल्मको टिमसंगै पोज दिएर बसेकी थिइन् । त्यति नै बेला पत्रकार उनको गाउनभित्र छिरेर भित्री..
विश्वमा मानिसका आफ्नौ रुचि र र शोख हुन्छन् । यस्तै एक पोर्न स्टार छिन्, जसले एक दिनमा करिब एक हजार जनासँग सेक्स सम्बन्ध राखेर विश्व रेकर्ड कायम गरेकी छिन् । एकै दिनमा बढी भन्दा बढी सेक्स पार्टनर फेर्ने व्यक्ति हुन्, एडल्ट फिल्म स्टार लिजा स्पाक्र्स । उनले सन् २००४ मा एकैदिन नौ सय १९ जनासँग सेक्स गरेकी थिइन् । यसो गर्नका लागि उनले हरेक ९४ सेकेन्डमा सेक्स पार्टनर बदलेकी थिइन्..
समलिङ्गी सेक्सको नालीबेली
पुरुषले पुरुषलाई र महिलाले महिलालाई मन पराएर सेक्स पार्टनरका रूपमा चयन गर्ने चलनलाई सम वा तेस्रोलिंगी भनेर बुझ्ने गरिएको छ। पछिल्लो समयमा समलिंगी/तेस्रोलिंगीलाई एलजिबिटी-लेस्बियन महिला समलिंगी, गे-पुरुष समलिंगी, बाइसेक्सुअल-उभयलिंगी सम्बन्ध, ट्रान्सजेन्डर-बहुलिंगी सम्बन्ध भनिन थालिएको छ। केही वर्षअघि दिल्लीको हाइकोर्टले भनेको थियो, ‘दुई पुरुष वा दुई महिला यदि आपसी..